महाभारतको रिहर्सल | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
महाभारत पुस्तकलाई पन्चवेद पनि भन्ने गरिन्छ । विश्वयुद्धहरुकै झलक दिने गरी व्यापक जनविनाश भएको विविध कथा प्रसंग अनौठो प्रकारका अस्त्र शस्त्र प्रयोग भएका रोमान्चकारी घटनाक्रम पढ्दा विश्व दर्शनको अनुभुति गराउँदछ । त्यही युद्धको मैदान कुरुक्षेत्रमा महारथि अर्जुनका सारथि बनेका योगेश्वर प्रभु कृष्णबाट गीता दर्शनको अनमोल ज्ञान उपदेश भएको थियो । त्यति व्यापक विनाशकारी युद्ध भएपनि क्षत्रिय बाहेकका सामुहिक योद्धा कमै रहेका र आम सर्वसाधारणलाई यस युद्धबाट सोझै असर नपरेको पनि उल्लेख छ किनभने त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता नै थिएन । त्यसैले कौरव वा पाण्डव जसले जितेपनि हार अन्ततः सर्वसाधारण को नै थियो र यही क्रम आजपनि निरन्तरतामा छ । महाभारतको युगान्तकारी घटनाको पुनरावृत्ति विभिन्न कालखण्डमा हुदै आएको छ । सत्ताको हानथापमा दुख पाउने पिल्सिने हामी सर्वसाधारण नै हौं । को सत्तामा आए के हुने वा नहुने शब्द नै निरपेक्ष बनेको छ । सार्वभौम भनेर प्रहसनको पात्र बन्नुपर्ने नाम आमजनताको आउने, सुख भोग ऐश्वर्य नेताजीहरुको मौलिक अधिकार बन्ने, उनिहरुकै लागि ऐन कानून संविधान उपयोग हुने, थिचिनु पर्ने हामीले नै, प्रताडित हुने परिस्थितिमा निरन्तरता देखिएको छ । कोही राष्ट्रवादी कोही विखण्डनवादी त कोही भाग्यविधाताको दंभ राख्ने अनौठा पात्रहरुबाट महाभारतको रिहर्सल भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । अब यथास्थितिमा नेपाल रहन सक्तैन । महाभारतको चक्रव्यूहमा परि सकेको छ । यो देश वर्ग विशेषका लागि भन्ने अहङ्कार यसको मूलमा छ । एमाले आफ्नो दलबल सहित तराई क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्न निस्क्यो, मधेशी मोर्चाले प्रवेश नै निषेध हुने तबरबाट संगठित आतंकको झलक दिने आक्रमण गरी युद्धको प्रत्यक्ष घोषणा गर्दै भयावह परिस्थिति निर्माण भइसकेको, सप्तरी भिडन्तबाट डर लाग्दा संकेत बुझ्न कठीन छैन । ७ दिनको अल्टिमेटमबाट चाहे जस्तो संविधान संशोधन स्थानिय निर्वाचन रद्द गर्ने लगायतका शर्तहरु राखी सकेको हुनाले यसको निहितार्थ र परिणाम के के हुन सक्तछ ? यस सन्दर्भमा सामयिक चिन्तन र विश्लेषण आवश्यक लागेको छ ।
सीमाङ्कन हेरफेर गर्न अहिलेको संसदलाई अधिकार छैन । संविधानको धारा २७४ ले नै यसलाई बन्देज गरी सकेको छ । त्यसैले उपेन्द्र यादवहरु त्यो धारा नै खारेज हुनपर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । यस्ता प्रत्यक्ष अर्थ बुझ्न सकिने संबैधानिक व्यवस्थाहरुलाई बुझेर पनि बुझपचाए झैं संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु अर्थहीन मात्र होइन गैरसंबैधानिक पनि हो । एमाले के भन्छ त्यसमा टीप्पणी समर्थन गर्न पर्ने मेरा लागि कुनै प्रयोजन छैन । कुनै दल संग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्धित नहुदाँ विशुद्ध व्यवसायिक वकीलको आँखाले कुनै द्वीविधा नरहेको कीटानी व्यवस्थालाई पनि खेलवाडको विषय बनाइएको हुनाले नेताजीहरुका क्रियाकलाप संविधान, राष्ट्र वा हाम्रा लागि नभई सत्ताको वरिपरि कुण्डली मारेर बस्ने प्रवृत्ति नै मुलमा छ । नयाँ नेपाल अत्यन्त सीमित व्यक्तिहरुका लागि आएको हुनाले यो चिरस्थायी हुन सक्तैन । कसैको आत्म तुष्टीका लागि नभएका हुन नसक्ने विषयहरु पनि उठान गरेको देख्दा नियन्ताहरुको क्षमता दक्षता र निष्ठा माथि स्वभाविक रुपमा सन्देह पैदा गर्दछ ।
मधेशी मोर्चाले स्थानिय तह प्रदेशको नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ भन्ने पनि शर्त राखेको देखिन्छ । संविधानले त्यसको अनुमति दिदैन त्यसो जानेर पनि माग किन राखिएको होला । यही अहम प्रश्न भित्र धेरै जवाफ छिपेका छन् । मधेशवादी दलहरुलाई एकतर्फ रुपमा दोषारोपण गर्नु पनि अन्याय हुनेछ । उनीहरुको अभिष्ट
द्वीराष्ट्रियता रहेको भनी महन्त ठाकुरहरु बारम्बार भनि रहेका छन् त्यो अप्रत्यक्ष हो, घोषित प्रत्यक्ष सी.के.राउतहरु बोली रहेका छन् तर अखण्ड नेपाल भन्ने कांग्रेसी गिरिजा कोइरालाले स्वायत्त मधेश दिने भनेर बकस दिए झै सम्झौता त गरेकै हो । त्यही लागु गर्नु थिएन भने सम्झौता किन गरियो ? प्रदेश अन्तरगत स्थानिय तह भन्नुको निहितार्थ वस्तुतः स्वतन्त्र शक्तिशाली
राज्य बनाउने मनसायबाट नै अहिलेका सीमाङ्कन लगायत माग उठेका हुन् । सप्तरी घटनाको मूलमा त्यही कुत्सित मनसाय छिपेको प्रष्ट छ । मधेशमा त सबै जातजाति क्षेत्रको बसोबास छ, त्यसैले वर्ग विशेषले मात्र एकाधिकार दाबी गर्नु गृहयुद्धको स्वरुप हो । त्यसैको रिहर्सलका रुपमा हिंसा आगजनी लगायत विविध अवरोध उत्पन्न भएका छन् । राज्य लाचार छाया भएर हेरी मात्र होइन निरीह बनेको छ । जिउ ज्यानको सुरक्षा गरी दिने कोही देखिदैन । त्यसैले यो महाभारतको रिहर्सल भइ निकट भविष्यमा भयावह परिस्थिति सिर्जना हुने लक्षण प्रकट हुन थालेका
छन् । सेना नायकहरुले यस्तै परिस्थितिलाई संकेत गरी विज्ञप्ति प्रसारित गरे होलान् भनि अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा सबैले नेपाली भएर बस्नु प¥यो नि ? अन्यथा देशद्रोहीको परिभाषा नै हराएर जानेछ ।
← अधुरो संविधानले देश जलाई रहेछ
एउटा नया“ शहीदको जन्म →